ဒုက္ခသည်များ၏ “ဒုတိယ မိခင်” သို့မဟုတ် မက်ဆီဒိုးနီးယား အမျိုးသမီး Lenče Zdravkin · Global Voices မြန်မာ
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 19 ဇန်နဝါရီ 2017 16:39 GMT
ဤစာပုဒ်​ကို အောက်​ပါ​ ဘာသာ​စကား​များ​တွင်​လည်း ဖတ်​ရှု​နိုင်​ပါ​သည် Français, Ελληνικά, русский, عربي, Deutsch, Español, English
မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ ဘဲလိစ်မြို့ရှိ သူမ၏နေအိမ် ဝရန်တာတွင် တွေ့ရသော Lenče Zdravkin. Photo by Viktor Popovski/IKS, CC BY-NC-ND 3.0
နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီ ရက်အများအလိုက မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ ဘဲလက်စ် (Veles) မြို့တွင် နေထိုင်သော သတင်းထောက်အဖြစ်မှ ပရဟိတသမားတစ်ဦး လုပ်နေသော Lenče Zdravkin (လန်ချေး ဇထရာ(ဗ)ကင်) ဟာ Samo prashaj ခေါ် (“တောင်းလိုက်ပါ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသော) အကျိုးမြတ်မကြည့် လူမှုရေးအဖွဲ့စည်းကနေ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။ သူမသည် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူများ နှင့် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီပေးနေသော သူမ၏ အလုပ်များကြောင့် အများပြည်သူ အထူးလေးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
Lenče Zdravki ၏ နေအိမ်သည် ဂရိနိုင်ငံမှ အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ဖြတ်သွားကြသော ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူများ နှင့် ဒုက္ခသည်များ အသုံးပြုသည့် သံရထားလမ်းများဘေးတွင် ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ ဂရိနိုင်ငံမှနေ မက်ဆီဒိုးနီးယားသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် သူတို့သည် ပုံမှန် လမ်းပန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်းများကို ရှောင်တိမ်းနေရပြီး၊ သူတို့ကို လမ်းကြုံတင်သော ယာဉ်မောင်းသမားများနှင့် လူနာတင်ယာဉ်များပင်လျှင် လူကုန်ကူးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံမည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူများ နှင့် ဒုက္ခသည်များသည် ဤ ဘားလကန် (Balkan) ဒေသတဝှိက် တောင်မှမြောက်သို့ ဖြတ်လျှောက်ရာတွင် ရထားလမ်းများကို လမ်းညွှန်တစ်ခုအဖြစ် သုံးကြရပါသည်။
၂၀၁၅ နွေရာသီတွင် ဥရောပသို့ ရောက်ရှိလာသော ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူများ နှင့် ဒုက္ခသည် အရေအတွက် မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝင်ရောက်လာခြင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် မက်ဆီဒိုးနီးရားအာဏာပိုင်များသည် ဥပေဒနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့် ယခုတွင် ဘားလကန် (Balkan) ရထားလမ်းကြောင်းတလျောက် လမ်းလျှောက်ဝင်ရောက်သူများ နည်းသွားခဲ့ပေမယ့် များစွားသောသူများသည် ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြဆဲပင် ဖြစ်သည်။ အများစုမှာ ရှုပ်ထွေးလှသော နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံခြင်းကို ရှောင်ရှားလိုသော စီးပွားရေးအရ ရွေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
Veles မြို့သည် Gevgelija မှ Tabanovce သို့သွားသည့် ရထားလမ်းကြောင်းတလျှောက် အလယ်လောက်တွင် တည်ရှိပါသည်။. Wikipedia photo by Maximilian Dörrbecker – Chumwa, CC BY-SA 2.5.
လမ်းခရီးကား ကြမ်းတမ်းအန္တရာယ်များလွန်းလှပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတောတွင်း မီးရထားလမ်းတလျောက်တွင် မတော်တဆထိခိုက်မှုများ နှင့် ဒေသခံလူရမ်းကားများ၏ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုများကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တို့၏ အသက်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။
ထိုဖြစ်စဥ်တွေကို ဒီအတိုင်း အလကားထိုင်ပြီး ကြည့်မနေနိုင်ပါဘူးဟု Zdravkin ဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွင် ပြောပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် သူမသည် တက်နိုင်သလောက် မိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များကို စတင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရ နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် ယင်းတို့ကိုဘက်မှ ရေးသားပေးသည့် မီဒီယာများ တွန်းပို့နေသည့် လူမျိုးခြားမုန်းတီးရေးများ မြှင့်တက်လာသည့်အကြားမှာပင် နောက်ပိုင်း သူမရဲ့ ကွန်ရက်ဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာပြီး ဆက်လက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Lenče Zdravkin သည် သူမ၏ နေအိမ်မြေအောက်ခန်းကို ရွေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များကို ပေးဝေမည့် လူသားချင်းစာနာမှုကူညီရေးပစ္စည်းထားရာ သိုလှောင်ရုံအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Photo by Viktor Popovski/IKS, CC BY-NC-ND 3.0
၂၀၁၃ ခုနှစ် အစပိုင်း မတ်လ ဒါမှမဟုတ် ဧပြီလလောက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ရာသီဥတူကလည်း အခုလိုပဲ အေးနေသေးတယ်။
သူတို့ဘယ်သူတွေလဲ သူတို့ကဘာတွေလဲဆိုတာကို မေးမြန်းစောင့်ဆိုင်းနေဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး။ ကျွန်မ အဲဒီလူငယ်လေးတွေကို မြင်တာနဲ့ပဲ သူတို့ကိုပေးဖို့ ပေါင်မုန့်တွေပြေးဝယ်ပြီး သူတို့ကို ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေအပေါ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေက မပြောင်းသေးပါဘူး အဲ့တော့ သူတို့ကို ကူညီရတာလဲ မလွတ်လပ်မလွယ်ကူပါဘူး။ အများသောအားဖြင့် ညပိုင်းတွေသပ်သပ်မှာပဲ ဒီအရာတွေက ဖြစ်နေတာပါ။ သူတို့အုပ်စုတွေ ရောက်လာဖို့ ကျွန်မ ညလုံးပေါက် ထိုင်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ခြေသံတွေက ဒေသခံလူတွေရဲ့ ခြေသံနဲ့ မတူပါဘူး။ သူတို့တွေရဲ့ ခြေသံက လေးလံပါတယ်။ ကျောက်တုံးတွေအပေါ် ဖြတ်လျောက်သွားတဲ့ သူတို့ခြေသံတွေ ကြားလိုက်ရင် သူတို့ပဲဆိုတာ ကျွန်မသိပါတယ်။
အလှူခံရရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မြေအောက်ခန်းမှာ ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့အတွက် အခြေခံလိုအပ်တဲ့ အသုံးဆောင်တွေ ရရှိနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ အချိန်အတော်ကြာအောင် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်နေခဲ့တာပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်မကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ထုခွဲရောင်းချလာရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အချို့ဒုက္ခသည်တွေက ဆေးဝါးတွေလိုအပ်တယ်လေ အဲဒါကြောင့် ကလေးတွေကို လွှတ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ ဆေးဝယ်ဖို့ ဆေးခန်းကို သွားခဲ့ပါတယ်။ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေကတော့ အမြဲလိုလို လိုအပ်နေတာပါပဲ။ ဖိနပ်၊ စားစရာ နဲ့ နွားနို့တွေက ကလေးတွေအတွက်ပေါ့။ တခါတလေမှာဆို ကျွန်မ ခြံဝန်းထဲမှာ၊ စင်္ကြတလျောက် နဲ့ လှေကားတွေပေါ်မှာ လူတွေ ၃၀၀၊ ၄၀၀၊ ၅၀၀ လောက်နဲ့ တချိန်တည်းမှာ ပြည့်နေတက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးရမလဲ ဖြစ်လာပြီပေါ့။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို စောင့်ရှောက်ရတယ်။ ဖျားနာနေတဲ့ သူတွေအတွက် လူနာတင်ယာဉ် ဒါမှမဟုတ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တွေကို ခေါ်ရပါတယ်။ အချို့ ဒဏ်ရာတွေဆိုရင် ကျွန်မတက်နိုင်သလောက် ကိုယ်တိုင်ပဲ ကုသပေးပါတယ်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ Velves မြို့ရှိ သူမ၏နေအိမ်တွင်တွေ့ရသော Lence Zdravkin. Photo by Viktor Popovski/IKS, CC BY-NC-ND 3.0
ဒုက္ခသည်တွေ မရောက်လာခင်တုန်းက ကျွန်မမှာ မိသားစုကြီးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်၊ အခုတော့ ပိုကြီးသွားတဲ့ မိသားစုတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရပြီပေါ့။ သူတို့က ကျွန်မကို လန်စီ ဒါမှမဟုတ် အမေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ တချို့ ကျွန်မထက် အသက်ပိုကြီးတဲ့ လူတွေကတောင် ကျွန်မကို အမေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော့် မိခင်အရင်းကို အလက်ပို (Aleppo) မှာ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်၊ ခင်ဗျားကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ ဒုတိယ မိခင်ပါ” လို့ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သူတို့က ကျွန်မကို ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ “အမေ အခု ကျွန်တော်တို့ လုံခြုံတဲ့နေရာကို ရောက်နေပါပြီ” လို့ ပြောကြပါတယ်။
သူတို့တွေအားလုံးက ကျွန်မကို လေးစားကြပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့စာတွေလဲ ပို့ကြတယ်။ တနေ့မှာ ကျွန်မကို ပြန်တွေ့ချင်လို့ ကျွန်မကို လာလည်ဖို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ မိသားစုဝင် ၁၃ ယောက်ပါတဲ့ မိသားစုတစ်ခုကို ပြန်လည်ပေါင်းဆုံဖို့ ကျွန်မ စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ကို ကျွန်မ ခြံဝန်းထဲမှာပဲ ပြည်လည်စုံစည်းစေခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာ သူတို့က သူတို့ရဲ့ ညီမအငယ်ဆုံးနဲ့ သူရဲ့ ကလေးတွေကို ရှာဖွေပေးဖို့ ကျွန်မဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး နောက်ထပ်ကူညီဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ လူပေါင်းထောင်ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကြားမှာ ယာစမင်း (Jasmine)၊ ယာစမင်း (Jasmine) နဲ့ သူ့ကို တွေ့သည်အထိ အော်ခေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တော့ မိသားစုတခုလုံး ပြန်လည်ဆုံးစည်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့က အခုတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲ၊ ကျောင်းသွားကြတယ်၊ ဘာသာစကားသင်ယူကြတယ်။ အတူတူပြန်လည်ဆုံစည်းရတာကို သူတို့တွေ ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။
မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ ဘဲလစ်မြို့တွင့် မီးရထားသံလမ်းများနှင့် အတူတွေ့ရသော Lence Zdravkin. Photo by Viktor Popovski/IKS, CC BY-NC-ND 3.0
မတော်တဆယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွေက ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ မီးရထားမတော်တဆမှုတွေကြောင့် အသက်ပေါင်းများစွာကို ဆုံးရှုံးကြပါတယ်။ အသက်ဆုံးရှုံးသူတွေထဲမှာ ကျွန်ဆီကိုလာခဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်မကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေ ပါပါတယ်။ ကျွန်မအိမ်နဲ့ ကီလိုမီတာအနည်းငယ် အကွာဝေးမှာပဲ ရထားက သူတို့ကို တိုက်သွားတာမျိုးပါ။ သူတို့ရဲ့ အစဉ်လာနှင့်အညီ သုသာန်အသစ်မှာ စျာပနအခမ်းနားကို ပြုလုပ်ပေးဖို့ရာအတွက် ကျွန်မ စီစဉ်ခဲ့ရတယ်။ သူတို့အတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ လေးစားမှုကို ပြသရန်အတွက် တရားဟောဆရာတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး ဓလေထုံးတမ်းအစဉ်လာနှင့်အညီ မြေမြုပ်သင်္ဂြုလ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ သူတို့အတွက် အောက်မေ့ဖွယ် အုတ်ဂူကို အာရပ်သင်္ကေတနှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ရေးသားပြီး ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ သူတို့ နာမည်တွေကို မသိပေမယ့် တယောက်ယောက်က သူတို့ကို ပြန်လာရှာခဲ့သည်ရှိသော် အဲဒီလို ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်မခံစားရပါတယ်။ သူတို့အကြောင်းကို တွေးမိတိုင်း အလွန်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီပုံရိပ်တွေကို ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက ထွက်ခွာသွားကြပေမယ့် သူတို့အကြောင်း သူတို့ပုံပြင်တွေကတော့ ကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိနေပြီး တခုချင်းစီက အမာရွတ်အနေနဲ့ ကျန်နေမှာပါ။
Lenče Zdravkin. ဓာတ်ပုံ Viktor Popovski/IKS, CC BY-NC-ND 3.0
စီးပွားရေးအရ ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကတော့ ရပ်တန့်မသွားပါဘူး။ အခုလေးတင်ပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက် ကျွန်မကို ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ သူက ဆီးရီးယားကလား အီရတ်ကလား ဘယ်ကလဲဆိုတာ ကျွန်မမသိဘူး။ “ကျွန်တော်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီခရီးကို ထွက်ခွာခဲ့ပြီ” “ခင်ဗျားရှိနေပါလား” လို့ ရေးသားစာပို့ခဲ့တယ်။ သူတို့ စကားလဲ ကျွန်မနားလည်၊ သူတို့ကလဲ ကျွန်မရဲ့ မက်ဆီဒိုးနိးယားစကားကို နားမလည်ကြပေမယ့် ကျွန်မတို့အချင်းချင်းကတော့ အလွယ်တကူပဲ နားလည်ကြပါတယ်။ မျက်လုံးအကြည့်နဲ့ အချင်းချင်း စကားပြောရုံနဲ့တင် တစုံတယောက်ကို ကူညီဖို့အတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ ကျွန်မအခုလို သူတို့ကို ကူညီပေးနေရတာက ကျွန်မ ကုသိုလ်ကံလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မ သူတို့ကို အများကြီး ကူညီခဲ့တယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူးနော် ဒါပေမယ့် သူတို့က အရမ်းကို ထိခိုက်ခံစားနေပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ အပြုံးလေးတစ်ခုကတောင် သူတို့အတွက် အများကြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝ၊ ရှေရေးကို စဉ်းစားနိုင်ပြီး၊ ဆက်လက်နေထိုင်လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိကာ ရယ်မောစရာတွေ ပြောနိုင်လောက်အောင် ခွန်အားတွေပြန်လည်ပြည့်ဝနေပြီဆိုရင် သူတို့ဆီကနေ ကျွန်မလည်း အားအင်တွေရမိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်မအနေနဲ့ ရှိတာနဲ့ပဲ အမြဲတမ်းရောင့်ရဲကျေနပ်နေရမယ်ဆိုတာကို နားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကို ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားရမလဲဆိုတာကို မသိတာကတော့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတယ်။
Samo prashaj ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသော Zdravkin ၏ ဆောင်းပါးသည် Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) license နှင့် မူပိုင်ခွင့်တင်ထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့အသံ (Global Voice) သည် ဤအရေးပါလှသည့် သက်သေခံချက်ဆောင်းပါးကို Skopje ၏ Institute of Communication Studies (IKS) မှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုကာ ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။